Soo dejisan GOM Media Player 2.3.55.5319 – Vessoft
WindowsMultimediaCiyaartoyda warbaahintaGOM Media Player
Bogga rasmiga ah: GOM Media Player
GOM Media Player – ciyaaryahan caan ah oo taageero ka audio iyo video qaabab waaweyn. software wuu awoodaa inuu ciyaaro faylasha qudhuntay, qabsadaan codka iyo video, codsan saamaynta, u aragto video spherical, iwm GOM Media Player taageertaa kala duwan qaabab Cinwaan iyo playlists. software waxaa ku jira adeegga si aad u raadiso codecs ka maqan oo uu ogaado oo downloads ka codecs lagama maarmaan ah in internet-ka. software The kuu ogolaanayaa inaad la qabsato xawaaraha loo maqli karo iyo caadi dhawaaqa. GOM Media Player ayaa sidoo kale u saamaxaaya in ay isticmaalaan badan oo harag ah in la beddelo interface ee ciyaaryahanka.
Taageerada ugu qaabab warbaahinta waaweyn
La wareegtay audio iyo video
Search ah codecs maqan ee internet-ka
Playbacks video ah spherical
Tilmaamo Advanced of goob
Soo dejisan GOM Media Player
Faallo ku saabsan GOM Media Player
GOM Media Player Xirfadaha la xiriira